HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Altaï Alur Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Efik Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
MIKORONTANA ity tontolo ity, ka tsy maintsy miezaka mafy isika raha te hiadana. Na efa mahatsiaro hoe miadana aza anefa isika, dia mila miezaka mafy matetika mba ho toy izany foana. Inona àry no torohevitry ny Tenin’Andriamanitra afaka manampy antsika hiadana foana? Ary ahoana no azontsika anampiana ny olon-kafa hahita fiadanana?
INONA NO ILAINTSIKA RAHA TE HIADANA ISIKA?
Raha tena te hiadana isika, dia mila mahatsiaro hoe tsy manana ahiahy sy sambatra. Mila miezaka hinamana tsara amin’ny olona koa isika. Ny fifandraisana tsara amin’Andriamanitra anefa no zava-dehibe indrindra, raha tiantsika ny hiadana foana. Inona no hanampy antsika hifandray tsara aminy?
Betsaka ny zavatra mampanahy, ka maro ny olona miady saina
Mila mankatò ny didiny sy manaraka ny toro lalany isika. Asehontsika amin’izany fa matoky azy isika, ary te hihavana aminy. (Jer. 17:7, 8; Jak. 2:22, 23) Hifandray akaiky amintsika izy amin’izay, ary hataony izay hahatonga antsika hahita fiadanana, izany hoe hilamin-tsaina. Hoy ny Isaia 32:17: “Fiadanana no ho vokatry ny tena fahamarinana, ary filaminana sy tsy fananana ahiahy mandritra ny fotoana tsy voafetra koa no ho vokatra haterany.” Tena hiadana sy hilamin-tsaina àry isika raha mankatò an’i Jehovah amin’ny fo manontolo.—Isaia 48:18, 19.
Manampy antsika hiadana foana koa ny fanomezana iray tena tsara avy amin’ilay Raintsika any an-danitra. Tsy inona izany fa ny fanahy masina.—Asa. 9:31.
Ny fiadanana no “vokatry ny fanahy” fahatelo noresahin’ny apostoly Paoly. (Gal. 5:22, 23) Tsy maintsy manaiky hotarihin’ny fanahy masina àry isika raha te hiadana, satria avy amin’izy io ny tena fiadanana. Ireto misy fomba roa anampian’izy io antsika.
Voalohany, lasa mahatsapa fiadanana isika rehefa mamaky tsy tapaka ny Tenin’Andriamanitra. (Sal. 1:2, 3) Rehefa misaintsaina an’izay voalaza ao isika, dia ampian’ny fanahy masina hahazo hoe inona no tian’i Jehovah ary inona no tsy tiany. Lasa fantatsika, ohatra, hoe inona no ataony mba hihavanana foana amin’ny hafa, ary nahoana izany no tena zava-dehibe aminy. Rehefa ampiharintsika ny lesona raisintsika avy amin’ireny zavatra vakintsika ireny, dia lasa mahatsapa isika hoe miadana kokoa.—Ohab. 3:1, 2.
Faharoa, tsy maintsy mangataka fanahy masina amin’Andriamanitra isika. (Lioka 11:13) Mampanantena izy fa homeny ny fiadanany isika, raha mitady fanampiana aminy. “Lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra” io fiadanana io. ‘Hiambina ny fontsika sy ny saintsika amin’ny alalan’i Kristy Jesosy’ izy io. (Fil. 4:6, 7) Hanampy antsika hilamin-tsaina i Jehovah raha mazoto mangataka fanahy masina aminy isika. Izay mifandray akaiky aminy ihany no manana an’izany fiadanan-tsaina izany.—Rom. 15:13.
Nampihatra ny torohevitry ny Baiboly ny olona sasany sady niezaka niova, ka mahita fiadanana. Lasa mifandray tsara amin’i Jehovah sy mihavana tsara amin’ny hafa izy ireo, ary milamin-tsaina.
AHOANA NO NATAON’NY OLONA SASANY?
“Mora tezitra” taloha ny rahalahy sy anabavy sasany. Lasa tsara fanahy kokoa anefa izy ireo, ary manam-paharetana sy mifandray tsara kokoa amin’ny olona. * (Ohab. 29:22) Anisan’izany i David sy Rachel. Inona no nanampy azy ireo hitandro fihavanana foana?
Hihavana tsara amin’ny hafa isika raha mampihatra ny toro lalan’ny Baiboly sy mangataka fanahy masina amin’Andriamanitra
Nisy vokany teo amin’ny fomba fitenin’i David ilay izy mora tezitra. Tia nanakiana izy tamin’izy mbola tsy nanompo an’i Jehovah. Nasiaka be koa izy rehefa niresaka tamin’ny fianakaviany. Tonga saina izy tatỳ aoriana hoe mila miova sy miezaka mifandray tsara amin’ny olona. Hoy izy: “Nampihatra ny toro lalan’ny Baiboly aho, dia lasa nifanaja kokoa izaho sy ny fianakaviako.”
Nisy vokany tamin’i Rachel ny fomba nitaizana azy. Hoy izy: “Mora nisafoaka daholo ny tao an-tranonay tamin’izaho mbola kely. Dia na hatramin’izao aza aho mbola miady mafy mba tsy ho mora tezitra.” Inona no nanampy azy hahay hihavana kokoa amin’ny olona? Hoy izy: “Nivavaka matetika tamin’i Jehovah aho mba hampiany.”
Hitantsika amin’izany fa lasa tia fihavanana ny olona, rehefa mampihatra ny toro lalan’ny Baiboly sy mangataka fanahy masina amin’Andriamanitra mba hanampy azy. Afaka ny hilamin-tsaina àry isika, na dia eto amin’ity tontolo mikorontana ity aza. Manampy antsika hifandray tsara amin’ny fianakaviantsika sy ny mpiara-manompo amintsika izany. Mampirisika antsika ‘hihavana amin’ny olona rehetra’ anefa i Jehovah. (Rom. 12:18) Ho vitantsika ve izany? Inona no ho vokany raha miezaka manao an’izany isika?
Manampy ny olona hahita fiadanana isika rehefa mitory momba ny Fanjakan’Andriamanitra. (Isaia 9:6, 7; Mat. 24:14) Faly isika fa maro no manaiky an’ilay hafatra torintsika. Lasa tsy kivy be intsony izy ireo na tezitra rehefa mahita ny zava-mitranga manodidina azy. Manana fanantenana azo antoka kosa izy ireo izao, ary lasa te ‘hitady fihavanana sy hitandro izany.’—Sal. 34:14.
Tsy ny rehetra no manaiky avy hatrany ny hafatra torintsika. (Jaona 3:19) Ampian’ny fanahy masina anefa isika, ka mahavita manaja an’ireny olona ireny sy mitandro ny fihavanana aminy rehefa mitory aminy. Mampihatra an’ireto tenin’i Jesosy ireto isika amin’izany: “Rehefa miditra ao an-trano ianareo, dia arahabao ny ao. Raha mendrika ny ao an-trano, dia aoka ho tonga aminy ny fiadanana irinareo ho azony, fa raha tsy mendrika kosa, dia aoka hiverina aminareo ny fiadananareo.” (Mat. 10:11-13) Raha manaraka an’io toroheviny io isika, dia hanana fiadanana foana, izany hoe ho tony na dia tsy mandray aza ny olona. Mety ho afaka hanampy azy koa isika amin’ny manaraka.
Mitandro fihavanana koa isika rehefa manaja ny manam-pahefana, anisan’izany ireo manohitra ny asantsika. Nitsara an-tendrony antsika, ohatra, ny fitondrana any amin’ny tany iray any Afrika, dia tsy nomeny alalana hanorina Efitrano Fanjakana ny mpiara-manompo. Inona no natao mba handaminana an’ilay olana? Misy ambasadin’ilay tany afrikanina any Londres, any Angletera. Nasaina nankany àry ny rahalahy iray efa misionera tany amin’ilay tany afrikanina. Nasaina nohazavainy tamin’ilay ambasadaoro ny zavatra tsara ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ilay tany. Inona no vokatr’izany?
Hoy ilay rahalahy: “Rehefa tonga tao amin’ny toerana fandraisana olona aho, dia fantatro avy amin’ny fiakanjon’ilay vehivavy mpandray olona hoe avy amin’ny foko inona izy. Haiko ny fitenin-dry zareo, dia niarahaba azy tamin’ny fiteniny aho. Gaga izy! Nanontany izy avy eo hoe: ‘Inona no anton-dianao?’ Nilaza taminy aho hoe mba te hihaona amin’ny ambasadaoro. Nantsoiny tamin’ny telefaonina àry ilay ambasadaoro dia tonga, ary niarahaba ahy tamin’ny fitenin’ilay foko. Noresahiko taminy hoe inona avy no ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nohazavaiko koa hoe tena tia fihavanana isika. Nihaino ahy tsara izy.”
Tsy dia mitsara an-tendrony ny asantsika intsony ilay ambasadaoro izao, noho ny fanazavana nomen’ilay rahalahy sy ny fanajany azy. Nofoanan’ny fitondrana tao amin’ilay tany afrikanina, tatỳ aoriana, ilay fandrarana ny fanorenana Efitrano Fanjakana. Faly erỳ ny mpiara-manompo tany fa voalamina tsy nisy romoromo ilay olana! Betsaka tokoa ny soa azo rehefa manaja olona isika, anisan’izany ny hoe mihavana tsara amin’ny olona.
AFAKA NY HIADANA MANDRAKIZAY IANAO
Ao amin’ny paradisa ara-panahy isika vahoakan’i Jehovah amin’izao andro izao, ary mihavana tsara. Vao mainka hampisy fihavanana ianao, raha miezaka ny hanana an’ilay vokatry ny fanahy hoe fiadanana. Tsy vitan’izany fa hahazo sitraka amin’i Jehovah ianao sady tena hiadana mandrakizay, rehefa ao amin’ny tontolo vaovao.—2 Pet. 3:13, 14.
^ feh. 13 Mbola horesahina ao amin’ity andian-dahatsoratra ity any aoriana any ny hoe hatsaram-panahy.